OTU ESI EJI USORO RECUVA - ESI MEE - 2019
Otu esi eji usoro Recuva
Mgbe edere akwụkwọ nkwado, enwere ọnọdụ mgbe e depụtara eserese na AutoCAD ka e zigara gị akwụkwọ ederede, dịka ọmụmaatụ, gaa na nkọwa nkọwa akọwapụtara na Microsoft Word. Ọ dị nnọọ mfe ma ọ bụrụ na ihe a na-adọta na AutoCAD nwere ike ịmegharịrị n'otu oge na Okwu n'oge edezi.
Otu esi esi na Avtokad gaa na Okwu ahụ, ka anyị kwuo okwu n'isiokwu a. Tụkwasị na nke a, tụlee ntinye njikọ na mmemme abụọ a.
Esi esi nyefee ihe osise si na AutoCAD gaa na Microsoft Word
Hụkwa: Otu esi tinye ederede na AutoCAD
Imepe AutoCAD na-abanye na Okwu Microsoft. Ọnụ ọgụgụ 1.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye nhazi ederede ngwa ngwa, jiri usoro "ntinye" -emere oge.
1. Họrọ ihe ndị dị mkpa na ubi mara ma pịa "Ctrl C".
2. Malite Microsoft Okwu. Debe onye ọbụla ebe ịbịaru kwesịrị. Pịa "Ctrl V"
3. Ịbịaru ya ga-etinye ya na mpempe akwụkwọ dị ka ntinye akwụkwọ.
Nke a bụ ụzọ dị mfe na nke kachasị mfe iji nyefee ntaneti site na Avtokad ruo Vord. Ọ nwere ọtụtụ nuances:
- N'ihe nile ederede nchịkọta ederede ga-enwe ọkpụkpụ kacha nta;
- pịa okpukpu abụọ na onyinyo ahụ na Okwu ga-ekwe ka ị gbanwee gaa na-abanye usoro nhazi site na iji AutoCAD. Mgbe ị na-echekwa mgbanwe ndị a na nbịaru, ha na-egosipụta na-akpaghị aka na ihe ederede.
- Njirimara nke foto ahụ nwere ike ịdị iche, nke nwere ike ibute nsogbu nke ihe dị n'ebe ahụ.
Hụkwa: Otu esi echekwa PDF ịbịaru na AutoCAD
Imepe AutoCAD na-abanye na Okwu Microsoft. Ọnụ ọgụgụ nke 2.
Ugbu a, anyị ga-agbalị imeghe ntinye na Okwu ka e wee chebe ịdị arọ nke eriri.
1. Họrọ ihe ndị dị mkpa (ya na igwe dị iche iche) na ubi ndị mara mma ma pịa "Ctrl C".
2. Malite Microsoft Okwu. Na Home taabụ, pịa nnukwu Fanye bọtịnụ. Họrọ "Gwakọta Pụrụ Iche."
3. Na ntinye pụrụ iche nke na-emepe, pịa "Foto (Windows Metafile)" ma tụlee nhọrọ "Njikọ" iji melite ịbịaru na Microsoft Okwu mgbe edezi na AutoCAD. Pịa "OK".
4. E gosipụtara eserese ahụ na Okwu ya na akara igwe mbụ. Ọrịa na-erughị 0.3 mm yiri ka ọ dị mkpa.
Biko mara: ịbịaru onwe gị na AutoCAD ga-echekwa iji mee ka ihe "Njikọ" rụọ ọrụ.
Ihe ndi ozo: Otu esi eji AutoCAD
Ya mere, a ga-esi na AutoCAD gaa na Okwu. N'okwu a, eserese na mmemme ndị a ga-ejikọrọ, na ngosipụta nke usoro ha ga-abụ eziokwu.